July 9, 2021 – Shwe Myanmar
Zawgyi လူတိုင်းလိုလိုညောင်းညာနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကိုအနည်းဆုံးတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ခံစားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာမဆိုညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းကို ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနေရာလေးတွေကိုနှိပ်နယ်ပေးလိုက်တာနဲ့သက်သာသွားစေနိုင်သလဲဆိုတာ.. 1. မျက်ခုံးနစ်ခုကြားနေရာ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား မျက်ကြောဟာ နေရာကိုလက်မလေးနဲ့ဖိဖိပြီးနှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုပြေလျော့စေပါတယ်။ 2. လက်ကောက်ဝတ် လက်ကောက်ဝတ်နားကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့အသာလေးဖိပေးပြီး နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာလည်း ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းသက်သာစေတာပါပဲ။ 3. နားထင် ဒီနည်းလေးကတော့ အထူးသဖြင့်…
Zawgyi ယနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့ ဆေးလိပ်ကို အမျိုးသားတွေသာမက အမျိုးသမီးတွေပါ သောက်သုံးလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် အမြဲတမ်းသောက်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆုပ်ဟာ ပျက်စီးလာနိုင်ပါတယ်။ အဆုပ်ပျက်စီးလာပီဆိုရင်တော့ မောတာတွေ အသက်ရှူမဝတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကိုပါ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ယခုတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေကို ဆရာဝန်တွေထုတ်ပြခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ယောက်ရဲ့…
Zawgyi သင်အနေနဲ့ သင်ပတ်ဝန်းကျင်က အသေးစိတ် အစစအရာရာ ကို သတိထားမိ တတ်ပါသလား။ တကယ်လို့ သတိထားမိ တယ်ဆိုရင် လေယာဉ်တိုင်းမှာ တောင်ပံတစ်ဖက်မှာ မီးနီ တပ်ဆင်ပြီး ကျန်တောင်ပံတစ်ဖက်မှာတော့ မီးစိမ်း တပ်ဆင်ထားတာကို သတိပြုမိမလားပဲ။ ဘာကြောင့်…
ပွညျသူတှေ မြှျောမှနျးထားသလို ပွနျလညျ လှတျမွောကျခွငျးမရှိသေးတဲ့ နာမညျကွီး အနုပညာရှငျမြား
Zawgyi ပြည်သူတွေ မျှော်မှန်းထားသလို ပြန်လည် လွှတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စလို့ ယနေ့ထိ အာဏာသိမ်း ကာလဟာဆိုရင် ၅ လမြောက်ကို ရောက်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
ရေ င တျ နေ တဲ့ တိ ရိ စ်ဆာ နျ တှေ ကို ရေ ရ ရှိ နို ငျ ရ နျ T R U C K ကားနဲ့ နာရီပေါငျးမြားစှာမောငျးနှငျသယျဆောငျပေးခဲ့တဲ့ အမြိုးသား
Zawgyi ရေငတ်နေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို ရေရရှိနိုင်ရန် Truck ကားနဲ့ နာရီပေါင်းများစွာမောင်းနှင်သယ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခုပြောပြမယ့် အကြောင်းလေးကတော့ ကမ္ဘာကြီးက ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြုံစဖူး အပြောင်းအလဲများကို ကြုံတွေ့နေရပြီး ကမ္ဘာရဲ့အချို့သောနေရာတွေမှာ ရာသီဥတု…
တျောလှနျရေးမှာ နထေိခံလို့မရတဲ့ အရပွေားရောဂါ ခံစားနရေတာတောငျ ပါဝငျခဲ့တဲ့ သကျမှနျမွငျ့ရဲ့
Zawgyi တော်လှန်ရေးမှာ နေထိခံလို့မရတဲ့ အရေပြားရောဂါ ခံစားနေရတာတောင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့အကြောင်း မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့် အနုပညာ သက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်တွေ များစွာတိုင်အောင် ပရိတ်သတ်တွေများစွာရဲ့ ချစ်ခင် အား ပေး မှုကိုရရှိထားသူလည်း…
Zawgyi (၄) လကျော် (၅) လနီးပါး ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ငိုရလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတောင် ခမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ ခင်စံပယ်ဦး မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ (၄) လ ကျော်ကြာ မြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးက ခုဆိုရင်…
ခုလိုလော့ဒေါငျး ကာလတှငျ တိုကျအပွငျထှကျပွီး အတငျးပွောခဲ့တာကွောငျ့ အမြိုးသမီး လေးဦး အရေးယူခံခဲ့ရ
Zawgyi ခုလိုလော့ဒေါင်း ကာလတွင် တိုက်အပြင်ထွက်ပြီး အတင်းပြောခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသမီး လေးဦး အရေးယူခံခဲ့ရ မင်္ဂလာပါ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခုပြောပြမယ့် အကြောင်းလေးကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အ မျိုးသမီးရဲ့ အဖြစ် အပျက်က သူတို့အတွက် ဝမ်းနည်း…
ပ ရိတျသတျရဲ့ အားပေးကွမျးမှုကွောငျ့ စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး L I V E S A LE ကို ဖြ ကျ ခြ ရ တဲ့ အထိဖွဈသှားရတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး
Zawgyi မှတ်ချက်များတွင် ဝိုင်းဝန်းဆဲဆိုအားပေးမှုကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း LIVE SALE ကို ဖျက်ချရတဲ့အထိဖြစ်သွားရတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး မှတ်ချက်များတွင် ဝိုင်းဝန်းဆဲဆို အားပေးမှုကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း live sale ကို ဖျက်ချရတဲ့ အထိဖြစ်သွားရတဲ့ မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦး…